About Us - Airpull (Shanghai) firita Co., Ltd
Started muna 1996, Airpull (Shanghai) Filter Kubvira yakura kuva zvachose mugadziri mhepo compressor filters. Somunhu mhoro-Tech Chinese zvebhizimisi mune ano munguva, kambani yedu akaratidza kuva nyanzvi chipo nokuda design, kugadzirwa, uye kuparadzira. Tinopa dzakasiyana-siyana mhepo compressor yokutsiva zvikamu kusanganisira mukuru wegiredhi zvinoriumba akadai mhepo filters, filters mafuta, uye separators mhepo mafuta. zvigadzirwa aya akanyorerwa rinoenderana vanozivikanwa pezvitsiga akadai Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair uye Fusheng. Kuwedzera mhepo compressor filters, tinogona kubereka mafuta filters hydraulic uye motokari filters nokuda makasitoma edu.
Our optimized mabhizimisi uchishandisa pachikuva unosanganisira inokosha utariri hurongwa kuti prioritizes utsanzi, kudyidzana kwenyika dzepasi pose, uye mutengi kutarisirwa. Muenzaniso kambani kwevanhu zvekuvaka Kutarisira akagadzirirwa nderokuita kukura tarenda nomumwe. Tinokurudzira kudzidza nguva dzose pamwe kugara yakarongwa zvidzidzo uye misangano. tsvimbo yedu gona rave akadzidza zvakanaka unhu vimbiso zvesangano.
Sezvo murevereri nzvimbo kudzivirirwa uye akasarudzwa "Green Enterprise", hatina nezveshoko Airpull (Shanghai) Filter kutanga nokuda eco ushamwari uye magetsi zvigadzirwa. All zvinhu Sefa ine shoma HV girazi-internet Sefa mapepa, yabva kuUnited States uye Germany. The American uye German substrate Kunowanzurudza mupise kunyatsoshanda kuderedza anodawo mari apo pakukoka zvinogona upenyu basa mhepo compressors. Advanced kugadzirwa michina uye rakanatswa kugadzira nzira kunge akatibvumira kuzadzisa imwe wepagore kugadzirwa inokwana 600 zviuru dzakabatana. The ISO9001: 2008 Quality Management System ari kushanda.
With Shanghai sezvo yedu chawo-of-kushandiswa, isu Export munyika yose kumatunhu kusanganisira Europe, South America, South-East Asia, kuMiddle East, etc. Tine akasarudzwa Distributor muThailand uye nemakanzuru vamiririri munyika dzakadai Iran uye Pakistan. Muno, redu nomumbure basa rinopa zvizere nhau munyika.
Muna 1996, takatanga mukugadzira Sefa cartridges vatatu quintessential Automotive filters.
Muna 2002, kukura kwedu specialization rakawedzerwa filters kuti sikuruwa mhepo compressors.
Muna 2008, mumwe fekitari idzva rakavakwa. boka redu Yakasvika vakanyorwa pasi zita Airpull (Shanghai) Filter.
Muna 2010, tiri akasimbisa mahofisi munzvimbo dzinooneka akadai Chengdu, Xi'an, uye Baotou.
Muna 2012, kuti BSC kuita utariri hurongwa rakatangwa. kwadzakabva ichi zvinobudirira kunozadza zvigadzirwa zvitsva kubva mumhuri uye kune dzimwe manyuko kupinda repertoire yedu.
Kubva 2012 kusvika 2014, musika yedu yose kwave richikurumidza kukura, uye isu vakabudirira vakapinda yokuHannover Messe muGermany uye PCVExpo kuRussia.